Charles Chaplin ၏အကောင်းဆုံးစကားစု (၁၅) ချက်နှင့်သူ၏သိချင်စိတ်များ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Charles Chaplin ၏အကောင်းဆုံးစကားစု (၁၅) ချက်နှင့်သူ၏သိချင်စိတ်များ
Charles Chaplin ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၁၅ ချက်ကိုမတွေ့မီသူ၏ repertoire တွင်အသံတိတ်မနေဘဲတစ်ခုတည်းသောအပိုင်းအစတစ်ခုကိုတွေ့ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဒါဟာဆံ၏သူ၏ဇာတ်ကောင်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်စေသည်မိန့်ခွန်းနှင့်ကိုက်ညီ ကြီးစွာသောအာဏာရှင်.
၁၈၈၉ ခုနှစ်၊ Aprilပြီ ၁၆ ရက်တွင်အသက်ရှင်ခဲ့သမျှတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးရုပ်ရှင်ကြယ်တစ်ပွင့်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ချားလ်စ် spencer chaplin.
အသက် ၆၃ နှစ်တွင်သေဆုံးသွားသောအသည်းအသန်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသည့်မိခင်တစ် ဦး ၏သားဖြစ်ပြီးအသည်းခြောက်ရောဂါ ၃၄ နှစ်တွင်သေဆုံးခဲ့သည့်အရက်ဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏မိခင်ကိုစိတ်ရောဂါကုဆေးရုံများသို့မကြာခဏ ၀ င်ခွင့်ပေးသောကြောင့်သူသည်မိဘမဲ့ဂေဟာများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ သူ၏ကလေးဘဝသည်အလွန်အမင်းဆင်းရဲခဲ့သည်။
သို့သျောလညျး အခွက်တဆယ်မှတဆင့်ချိုးဖဲ့ နှင့်ရုပ်ရှင်ရုံ၏ကြယ်ပွင့်အဖြစ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်၏တေးရေးဆရာ၏တေးရေးဆရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော Charlot သည်သူမနှင့်အတူသူနှင့်အတူရှုပ်ထွေးနေခြင်း၊ အုတ်များနှင့်တောင်ရှုပ်ရန်မတွန့်ဆုတ်သောအမျိုးသမီးများနှင့်အမူအကျင့်ကောင်းများပါသောလှပသောသွင်ပြင်ဖြစ်သည်။
1) ချားလ်စ်ချပ်လင်းအမည်ရှိခဲ့သည် ခင်ဗျား ထို့ကြောင့်သူမသေဆုံးခင်နှစ်နှစ်အကြာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်ဆာချားလ်စ်စပန်ကာချပ်လင်းဖြစ်သည်။
2) ဟစ်တလာ၏နာဇီဝါဒဖြန့်ချိမှုအကြီးအကဲ Goebbels က Chaplin ကို: "ဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောသေးငယ်တဲ့ဂျူး".
Charles Chaplin သည်သမိုင်းတွင်ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ငါရွေးချယ်မှုနှင့်အတူသင်တို့ကိုစွန့်ခွာ သူ၏ ၁၅ အကောင်းဆုံးစကားစုများ
2) သင်သည်သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးမနက်ဖြန်သေဆုံးမည့်သူကဲ့သို့နေထိုင်ရန်သင်ယူပါ။
4) ဘ ၀ ကိုရှင်သန်ရန်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်တိုက်လှန်ပါ။ သင်မကြောက်ရွံ့ပါကဘဝသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
5) မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ ထိုတွင်လျှို့ဝှက်ချက်ရှိသည်။ ငါမိဘမဲ့ဂေဟာမှာလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့စားစရာတစ်ခုခုရှာနေရင်တောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးသရုပ်ဆောင်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ အကြွင်းမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိရင်၊
6) ဘဝသည်အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းကိုခွင့်မပြုသည့်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာသီချင်းသည်၊ ရယ်မောရန်၊ ကခုန်ရန်၊ ငိုရန်နှင့်သင်၏အသက်တာ၏အချိန်တိုင်းတွင်အပြင်းအထန်အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်။
10) ပြုံးဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းပြုံးမထားသောနေ့သည်ဖြုန်းတီးသောနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
12) ဒီဆိုးညစ်သောလောကမှာအမြဲတမ်းဘာမှမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများပင်မဟုတ်ပါ။
13) စကားပြောရန်သင့်အလှည့်ကိုမစောင့်ပါနှင့်၊ တကယ်နားထောင်ပါ၊
14) လူတစ်ယောက်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှနက်ရှိုင်းစွာနေထိုင်လိုသည်။ သူ၏ ၀ ိညာဉ်အားဝမ်းနည်းဖွယ်ဂုဏ်သိက္ခာခံစားစေခြင်းသည်လူရွှင်တော်တစ် ဦး အတွက်ဆိုးဝါးသောအရာဖြစ်သည်။
15) ရယ်မောပါနှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုသင်နှင့်အတူရယ်မော; အော်ဟစ်ခြင်း၊ လောကီသားတို့က၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Charles Chaplin ၏အကောင်းဆုံးစကားစု (၁၅) ချက်နှင့်သူ၏သိချင်စိတ်များ
Biosca နှင်းဆီ ဟုသူကပြောသည်
M'encantes ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအထိခိုက်မခံတဲ့အပြင်အခြားသူတွေကို၊ သင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခြားသူတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးလေ့မရှိဘူး၊
Rosa Biosca အားပြန်ပြောပါ
ငါဒီ post ကိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ချစ်တယ် ကျွန်ုပ်သည် Charles Chaplin ကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးပြီးသူသည်ဘဝနှင့်မျက်နှာပြင်တွင်ပါရမီရှိသောသူဖြစ်သည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
Master Pablo အားပြန်ပြောပါ
jin zaka ဟုသူကပြောသည်
ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခြင်းအားဖြင့်လက်တွေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မည်သူမျှမတူညီကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင်ထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုရှိပြီးသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာကိုပြသပါ။ ဒါက Charles Spencer Chaplin လုပ်ခဲ့တာပဲ၊ မင်းတို့လည်းတခြားသူတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်။
Jin zaka သို့ပြန်သွားရန်
အစပြုသူများအတွက်7တွေးတောဆင်ခြင်ရန်အချက်များ
စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းအိပ်ပျော်ရန်ရိုးရိုးလှည့်ကွက် ၁၁ ခု